Archives finday - SmartMe
Archives tag: smartphone
Dom » Entina notsongaina miaraka amin'ny "smartphone"
Vaovao, finday avo lenta
OnePlus 9 Lite - salanisa avy amin'ny orinasa matematika
vaovao, oneplus, finday avo lenta, finday avo lenta, mediocre
OnePlus 9 Lite (na anarana hafa OnePlus 9E) dia vao nambaran'ny orinasa matematika antsoina hoe "sekoly ambaratonga faharoa". Amin'ity fanapahan-kevitra ity dia miverina amin'ny filozofia nampiasainy tamin'ny finday voalohany (OnePlus 1 sy 2 ary OnePlus ny mpanamboatra ...
Xiaomi isa 3 - nandresy niaraka tamin'i Apple
6 Desambra 2020
paoma, Gartner, huawei, mpanohitra, Samsung, finday avo lenta, xiaomi
Mitohy ny fanafihana ataon'i Xiaomi. Miezaka hatrany ny mpanamboatra fitaovana sinoa ho tonga mpitarika eo amin'ny tontolon'ny fitaovana marani-tsaina ary hitanao fa mandeha ity paikady ity. Vitan'izy ireo ny nanary an'i Apple avy ...
POCO M3 mialoha
2 Desambra 2020
poco, m3 kely, finday avo lenta, xiaomi
Tamin'ny herinandro lasa teo, ny POCO Global dia namoaka ny maodely farany finday avo lenta - POCO M3. Izy io dia miaraka amina fakantsary telo miaraka amina lens 48MP, bateria 6000mAh, efijery FHD + ary processeur Qualcomm® Snapdragon ™ 662. POCO M3 ...
Xiaomi "Control Panel mbola mijanona miasa" [Vahaolana]
22 Novambra 2020
Android, finday avo lenta, xiaomi
Androany, aorian'ny 20:00, nisy ny olana tamin'ny maodely smartphone Xiaomi sasany. Ny efijery dia naneho hatrany ny lesoka "Control Panel mbola mijanona miasa" isaky ny segondra vitsy, manakana ny fampiasana telefaona. Ireo mpampiasa dia mitatitra ny olana, ankoatry ny hafa ...
Realme dia manambara ny drafitra ho an'ny taona 2020.
11 Janoary 2020
iot, Realme, smartband, finday avo lenta, manan-tsaina fiambenana
Andro vitsy lasa izay, ny orinasa sinoa Realme, izay nifandraika tamin'ny fahitalavitra teo aloha, dia nanambara fa tamin'ny 2020 dia mikasa ny hifantoka amin'ny akora, rindrambaiko, ny vokatra IoT (Internet of things) sy ny finday. Araka ny voalazan'i Madhav Sheth, Tale Jeneraly ...
I Xiaomi dia nametaka fakantsary nafenina tao ambanin'ny fampisehoana
fakan-tsary eo ambany fisehoana, finday avo lenta, fakantsary miafina, xiaomi, xiaomi mi mix 4
Ny fakan-tsary amin'ny fahitana, amin'ny ranomaso ary mety averina amin'ny mekanika - ity no fomba niova tamin'ny fironan'ny fakan-tsary eo amin'ny finday vao haingana. Miezaka ny mampiasa ny tsara indrindra amin'ny velaran'ny efijery fitaovana, mandritra ny fitazonana ny ...